Date My Pet » 5 Zavatra Celebrities Afaka ianarantsika momba Fifandraisana
Ny vaovao ny "nanamafy licence" George Clooney niely haingana toy ny menaka afo amin'ny lakozia; Manafintohina ny firenena, ary manome ny vehivavy eran-tany ny tara-panantenana.
Izany dia midika hoe "voamarina": Tsara tarehy George mifanambady!
Izay mandeha ny hanaporofoana fa fanoloran-tena phobia afaka ho sitrana tokoa.
Izany ihany koa ny mametraka ny zavatra hafa vitsivitsy Ho antsika eto amin'izao fotoana izao hijery ...
Fa ny glitz rehetra, glamor, vola, sy ny voninahitra, raha ny hoe mampiaraka sy ny fivadiany, misy zavatra iray izay tsy azo lavina: kintana dia tahaka ny sisa amintsika.
Marina izany. Ireo ry namana fa matetika isika no idolize sy hiandrandra ho toy ny, miady amin'ny sasany ny olana sy ny zava-tsarotra toy izany koa ho antsika "ny mety maty."
Zavatra toy ny tsy natoky tena, Baby Mama tantara an-tsehatra, tahotra, fifanjevoana, ary ny fanitsakitsaham-bady– mba hilaza vitsivitsy. Manaporofo fa ny fitiavana no faratampony equalizer.
Ny lehibe indrindra eto samy hafa?
Ny raharaha manokana olo-malaza no scrutinized, Nitsikera sy nilalao avy amin'ny sehatra-pirenena, ny fijerena-bahoaka.
Toy izany, eto no lesona vitsivitsy azontsika ianarana avy amin'ny tena hita "andraikitra" sy romances.
Mahazo ny pensilihazo vonona.
1. Fanitsakitsaham-bady dia tsy foana ny momba ilay "vehivavy hafa" ho prettier na mitondra mihoatra ny latabatra. Indrisy anefa fa, ry zalahy Tsy foana "ny varotra."
Diniho tsara tarehy, manan-talenta, vita mitarika vehivavy any Hollywood sy ny olo-malaza, izay efa voalaza fa mamitaka amin'ny: Halle Berry, Sandra Bullock, Jennifer Anniston, Maria Shriver. Inona no azontsika ianarana eto? Fanitsakitsaham-bady dia bebe kokoa momba ilay olona ny olana noho ny olona rehefa mamitaka amin'ny. Aza mangidy, ho tsara kokoa.
2. Ny vola dia tsy afaka mividy foana fahasambarana. Asehon'ny antontan'isa fa iray amin'ireo mpitarika mahatonga ny fisaraham-panambadiana any Amerika dia vola. Na izany aza, any Hollywood, izay nivory malaza kokoa noho ny ankamaroan'ny vola avy amintsika ho mandrakizay mahita ao ny androm-piainany, mbola misy "olana any Paradisa." Hoy ny Baiboly momba ny herisetra isan-kerinandro lohatenin-gazety, hery ady, mampiankin-doha fitondran-tena, fahatezerana fitantanana, ary ny fanitsakitsaham-bady. Izany ihany no mandeha mba hampisehoana fa tsy foana affluence vokany eo fahasambarana.
3. Age samy hafa tsy voatery ho ny "fifanarahana mpandika."Jereo Jennifer Lopez sy ny choreographer cutie, Casper. Misy tokony ho 20 taona ho an'ny taona niely mivady, fa toa ho nahazo miaraka fabulously. Raha ny tena izy, fa tsy fahita firy ny mahita JLO tsy nisy tsiky teo amin'ny tavany ireo andro. Ankizivavy ianao!
4. Voamarina bachelors afaka fiovam-po.
Indraindray dia mila ny vehivavy tsara. Fotoana hafa, fotoana dia mety ho lafin-javatra lehibe. Never Say Never.
5. "Raha amin'ny voalohany tsy hahomby, andramo indray mandeha. " Na dia vitsy amintsika no te-hiaina ny nifandimby ny mpiara-miasa sy ny fihaonana fohy dia efa nanatri-maso amin'ny kintana sasany, misy zavatra tokony hoe noho ny fihetseham-pony sy ny finoany ny faharetantsika fa afaka manoratra ny "tsara fiafara" fitiavana manokana ny tantara, amin'ny sisa misokatra ho tia. Ohatra, olo-malaza toa an'i Steve Harvey, Jennifer Lopez, Elizabeth Burton, ary Demi Moore no nandeha nidina ny lalantsara kokoa noho ny fotoana na roa. Nihevitra ny filozofia? Amin'ny farany, Tsy maintsy hifikitra.
Misy manana izany.
Stars fampisehona ho antsika. Indraindray afaka hampianatra antsika. Ireo lesona dimy manompo manokana ho amin'izany. Tokony hanaraka izany rehetra.